Weerar Khasaare Gaystay oo Afghanistan ka dhacay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Weerar Khasaare Gaystay oo Afghanistan ka dhacay
Wararka ka imaanaya Dalka Afghanistan ayaa sheegaya in weerar Gaari loosoo adeegsaday uu kabdhacay, kaasi oo ay ka dhasheen Dhimasho iyo dhaawac, sida laga soo xigtay ilo Maxali ah oo warbaahinta la hadlay.
Weearkaan ka dhacay Dalka Afghanistan ayaa inta la xaqiijiyay Waxaa ku dhintay lix xubnood oo ka tirsan xoogagga kacdoonka dadweynaha, halka afar kalena lagu dhaawacay, kadib markii bar-koontarool oo ciidamada amniga ee gobolka Herat ku sugnaa qaraxa lala eegtay.
Warbaahinta Gudaha ayaa kusoo waramaysa in Qasaaraha uu intaasi ka badanyahay, balse muuqaalo laga duubay goobta wax ka dheceen ayaa muujinaysa bur bur aad u baahsan.
Ma jirto koox sheegatay masuuliyadu weerarka, inkasta oo Badi qaraxyada Afghanistan ka dhaca ay dusha saarato Daacish. Dhanka kalane Dowlada Afghanistan ayaa wali wax war kasoo saarin weerarkaan.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 25-02-2021
Next articlePuntland oo sheegtay in dadkii banaanbax dhiga Maxkamad lala tiigsan doono